ओक पात र फल। को ओक को फल जहाँ
ओक anciently फरक मानिसहरूका बीचमा एक राम्रो प्रतिष्ठा र लोकप्रियता गरिन्थ्यो। पनि प्राचीन ग्रीस मा stately र उपयोगी रूख गाँसिएको संरक्षक देवता अपोलो, कला र विज्ञान को नाम। पुरातन Slavs गर्जन र बिजुली spewing, Perun को ओक प्रतीक विश्वास गरे। केही लेखक ल्याटिन सामान्य नाम Quercus अर्थ ग्रीक शब्द अनुरूप व्याख्या "कुनै न कुनै।" को ओक को फल शीर्ष wrinkled कप आकारको involucre एउटा पुरानो रूख मा छाल बाहेक, कवर भन्ने तथ्यलाई गहिरो fissures गरेर कटौती गरिएको छ।
साधारण ओक को वनस्पति विवरण
को जीनस परिवार ओक बीच (Fagaceae) पर्छ। यो अनित्य रूखहरू, शायद एक विस्तृत वितरण क्षेत्र संग shrubs। लागि सामान्य हेर्नुहोस् अनित्य वन Pedunculate ओक (Quercus robur) - र युरोपेली रूस, पश्चिमी र पूर्वी युरोप को जंगल steppe क्षेत्र। डी vulgaris, डी गर्मी, डी अंग्रेजी - यो बोट को अन्य प्रजातिहरु अठोट। पेड को उचाइ वृद्धावस्थाको छ 40-50 मिटर, व्यास - युरोप मा ओक को व्यक्तिगत नमूनों को 1.5-2 पु आयु उदाहरण, जापोरोझे र Stelmuzhsky Oaks लागि, 700-2000 वर्ष पुग्यो .. डी, साधारण pinnatilobate फारम छोड्दा तिनीहरूले गाढा हरियो, चमकदार र माथि देखि leathery तल grayish हरियो छन्। सानो छाडा inflorescence फूल गठन। यसको स्थान pollination गठन फल-नट पहेंलो-खैरो अनुदैर्ध्य बैंड संग रंग पछि।
ओक फल - कटुस
Cupule कप आकारको कम भाग inflorescences खोक्रो कुनै न कुनै बाहिर गठन गरिएको छ यो grayish छ। व्यास 1.5 सेमी पुगन, फल लगभग गोलाकार गर्न सकिन्छ। Acorns सामान्यतया oblong हो, 2.5-3.5 सेमी लामो। Reclamation पछि वनीकरण र reforestation प्रयोग प्रजाति वितरण लागि प्रयोग ओक को फल।
Acorns एक multistory भवन को चोकमा, बगैंचामा, देश मा लगाए गर्न सकिन्छ। पहिलो केही वर्ष बिरुवा बिस्तारै बढ्न। त्यसपछि ट्रंक thicken र लम्बाइमा विस्तार गर्न सुरु, तल्लो हाँगाहरू भुइँमा बन्द उच्च हो। Fruiting अंकुरण पछि बारेमा 15-20 वर्ष पछि, लेट सुरु, तर त्यहाँ acorns पनि थप हाल समय हो। सुरुमा वा शरद ऋतु को मध्य मा फसल बीचको सडक खण्ड मा ओक को पाकेको फल। को workpiece बीउ को दक्षिणी क्षेत्रहरु मा अक्टोबर देखि नोभेम्बर छन्।
को जीनस Quercus रूखहरू व्यावहारिक महत्त्व
त्यहाँ तिनीहरूलाई थुप्रै फर्निचरहरू उद्योग मा प्रयोग गरिन्छ ओक को बारेमा 450 प्रजाति छन् संसारमा सबै, जहाज निर्माण, औषधीय गुण र पोषण मूल्य छ। पछिल्लो शताब्दीमा ओक जंगल भूमि पाराले जोतेर, निर्माण मा काठ को प्रयोग कारण घनी आबादी क्षेत्रमा कडा हिट छन्। को तटों मा चिल्लो चड्डी अझै पनि डुङ्गा, जहाज को निर्माण को लागि प्रयोग गरिन्छ। छाल र काठ यसलाई लामो भएको छ टेनिंग उद्योग मा एक स्रोत-टेनिंग यौगिकों छन्। पात र acorns रंग ऊन छन्।
ओक काठ बाक्लो, कडा, भिजेको अवस्थामा पनि Rot गर्न प्रतिरोधी छ। सुन्दर रंग र बनावट, लोच र सामाग्री को अन्य गुण व्यापक आवास निर्माण र फर्नीचर उद्योग मा प्रयोग गर्न अनुमति दिनुहोस्। हावा पहुँच बिना वर्षसम्म पानी अन्तर्गत छन् stems भने, तिनीहरूले गाढा र पनि बलियो बन्न ( "धाप ओक")। लचीलापन र काठ बाट गंध को कमी अत्यधिक रक्सी, रक्सी, बियर, रक्सी लागि व्यारेल को उत्पादन मा मूल्यवान छन्।
acorns को पोषण मूल्य
को ओक को फल के हो, आफ्नो क्यालोरी सामग्री - अनित्य र मिश्रित वन मा जंगली बँदेल प्रजनन लागि महत्त्वपूर्ण संकेतक हो। अत्यधिक पौष्टिक acorns घरेलू सुँगुर, सुकेको र milled फल को आहार विविधता गाई दिन, कुखुरा। प्रति वन वृक्षारोपण को 1000 हा 10-20 टाउको भन्दा बढी हुँदैन जंगली boars को ओक औसत संख्या सुरक्षित गर्न। जब खेती कम बीउ र खाद्य आपूर्ति, लागि वन गहन प्रयोग बल्लतल्ल को undergrowth गठन। पनि जंगली boars, ओक फल पनि खाना प्रोटीन, raccoons, मृग, woodpeckers र जे रूपमा सेवा आफ्नो आहार को 25% को राशि।
Acorns रूख जीनस Quercus आफ्नो संरचना मा समावेश:
कार्बोहाइड्रेट - 50,4% गर्न;
तेल - बारे 4.7%;
प्रोटिन - बारे 4.4%;
फाइबर - 4.2% सम्म;
500 क्यालोरी - acorns 100 ग्राम को पोषण मान। तपाईं फल यो मात्रा तेल को 30 ग्राम प्राप्त गर्न सक्छन्। acorns देखि आटा पाक रोटी लागि उपयुक्त छ, यो भाँडा गर्न थप गर्न सकिन्छ। वृद्ध मानिसहरू युद्ध र युद्धपछिको वर्ष, ओक को फल अनिकालबाट देखि मुक्ति कसरी सम्झना। सुकेको र जमीन acorns अझै पनि यो कफी पिउन प्रतिस्थापन बनाउन र पिउन, निर्णय गरे। यो जठरांत्रिय विकार र रक्तअल्पता संग मद्दत गर्छ। कफी राम्रो को स्वाद, तर एक सानो चीनी सदृश। को खुशबूदार अरेबिक अनाज गर्न accustomed एक मानिस, कटुस पेय यो मन छैन। तिनीहरूले, टेन्निसको adversely को अन्तस्करणले काम असर गर्न सक्छ गर्नुपर्छ मुछिन।
कटुस कफी र पीठो तयार ओवन मा वा कराइ मा, सूर्य सुखाने, soaking समावेश छ। टनीन को मात्रा आकार involucre, को कटुस मा सानो कप आकारको ढक्कन, को tannic एसिड तल्लो सामग्री द्वारा निर्धारण गर्न सकिँदैन।
लोक चिकित्सा मा ओक पात र फल
रूसी स्नान लागि लोकप्रिय सामान - पात एक रूखको Bunched शाखा। यो ओक twigs मात्र हार्डी मान्छे प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। विस्तृत पात ब्लेड शरीर गर्न तातो बाफ को तीव्र पम्पिंग योगदान। एक स्नान वा शवर पातहरु को एक decoction प्रयोग पछि कुल्ला। यो, टेन्निसको, जीवाणुरोधी र विरोधी भडकाऊ प्रभाव धनी हो। ताजा वा सुकेको पात एक मोर्टार मा triturated र disinfection लागि स्क्राच घाउ लागू भएको थियो।
औषधीय यौगिकों मा धनी ओक छाल। औषधि तयारी लागि यो रुखको रस प्रवाह को अवधिमा जवान रूखहरू काट्न छ सुकेको र milled। छाल एक decoction गैस्ट्रो-आंतों विकार, mouthwashes र घाँटी, मुखासे, छाला रोग लागि स्नान लागि प्रयोग गरिन्छ।
मानिसहरूलाई सुकेको कटुस देखि पाउडर एक antiviral एजेन्ट र एक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने रूपमा चिकित्सकीय मान छ। Milled र पखाला निर्मूल गर्न, मूत्र प्रणालीको रोगहरु मा प्रयोग गरिन्छ पानी ओक फल पकाएको। को घाँटी र झाडापखाला मा toxins, चयापचय सुधार, दुखाइ को शरीर शुद्ध यो लोक उपाय लिनुहोस्।
बागवानी र परिदृश्य डिजाइन मा ओक प्रयोग
को जीनस Quercus सदस्य व्यापक बागवानी बस्तियों, शहरी उच्च वृद्धि भेगका चोकहरूमा र फार्महाउस प्रयोग गरिएको। बगैंचाहरु, alleys, ओक को एकान्त नमूनों पार्क सजाउनु। ठूलो पात हावा सफाई, अस्थिर उत्पादन धेरै फेंकना। गर्मी ओक प्रजाति पूर्ण शरद ऋतु मा यसको पात बगाएको। तन्तु प्रारम्भिक - अप्रिल मा। छोड्छ जाडो उप अप्रिल वा मे मा अन्त मा देखा, गिरावट अप सुक्खामा, तर जाडो लागि गिर छैन।
हालैका वर्षहरूमा, हरियो भवन मा ओक को प्रयोग मा एक बढ्दै चासो। लोकप्रियता को एक नयाँ दौर लागि कारण बीचमा - सजावटी प्रकारका एक pyramidal मुकुट, खेती सिर्जना, लेट आफ्नो पात बगाएको। बगैंचामा एक ओक रूखमुनि primroses वा violets को एक फूल ओछ्यानमा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यो गाढा ट्रंक कोमल beaters विरुद्ध सुन्दर देखिन्छ काठ Anemone।
शिक्षा र शैक्षिक उद्देश्यको फल मा ओक को प्रयोग
ती जो गरिन सक्छ ओक को फल भनिन्छ कसरी रूखहरू लाभ, बारेमा कक्षा कुरा मा बाल सदन बच्चाहरु। प्रिस्कूल र साना विद्यार्थीहरू मजा रचनात्मक गतिविधिहरू, खेल, शिल्प र प्राकृतिक सामाग्री देखि सिर्जना रचनाहरूको लागि acorns संकलन गर्न। फल सुखाने दरार छैन जब, मात्र यसलाई पकड छैन Cupule। कटुस सुई, मिलान प्वाल पार्ने काम र उसलाई मान्छे र जनावर, मोती को तथ्याङ्कले बनाउन सक्छ। सँगै foresters ओक संग ग्रामीण विद्यालयमा उच्च विद्यालय विद्यार्थी वनीकरण र आफ्नो ईलाका Greening लागि फल फसल।
को ओक को फल सम्बन्धित रोचक तथ्य
पहिलो पूर्ण फल रूख मा क्रप उमेर को 50 वर्ष मा गठन गरिएको छ। Centennial ओक 2.2 हजार। Acorns को सिजन औसत उत्पादन गर्छ। नयाँ रूख मा बढ्छ 10 औं को केवल एक फल हो। ओक को फल प्रजाति प्रोपेगेट लागू रूपमा यसले पनि महत्त्वपूर्ण छ। को acorns विशेष तयार माटो मा लगाए र खेत हेरविचार गर्दै भने, अंकुरण दर वृद्धि गरिएको छ।
विभिन्न मानिसहरूले को पौराणिक कथाहरु मा ओक शक्ति, दीर्घायु, असाधारण लडाई मा साहस संग सम्बन्धित छ।
जापान मा दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा, विद्यार्थी acorns को लाख 1 भन्दा बढी टन संकलन गरेका छन्। यो उत्पादन र भात को आपूर्ति मा गिरावट मा भोकमरी बाट जनसंख्या सुरक्षित गरियो।
सबै भन्दा ठूलो स्मारक कटुस र्याले मा उत्तर अमेरिका मा स्थापित (उत्तर कैरोलिना)। 0.5 भन्दा बढी m - यसको उचाइ3मिटर, को वजन छ।
पौराणिक कथा अनुसार, रूसी Tsar पत्रुस महान् सेन्ट पीटर्सबर्ग को उत्तर-पश्चिम गर्न फिनल्याण्ड को खाडी को तट मा हिड्ने, एक कटुस घट्यो। यो घटना गाउँमा बाट सम्म रिसोर्टमा क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ कि एक स्मारक समर्पित छ। यो घाम छ। कटुस धातु बाट जाली र समुद्र तट मा सडक नजिकै हरियो क्षेत्रमा माउन्ट छ।
एक Leek बिरुवा रोपण। Leeks: प्लट मा बढ्दै
पैदावार वृद्धि गर्न एक तरिका रूपमा शरद ऋतु नासपाती रूख छाँट्ने
कति पटक जीवन बकाइन फल मा, विशेष गरी फूल
जब खुला गुलाब: आफ्नो संरक्षण को लागि केही नियम
उथला फूल anthurium
Monoecious बिरुवाहरु: उदाहरणहरू
इस्पात फाइबर ठोस: सुविधाहरू, GOST
Andrey Sviridov: उचाई र तौल, अभिनेता को साथै जीवनी
सिमी संग सलाद। लागि नुस्खा
सुनको खेल क्यासिनो: समीक्षा। सुनौलो खेल क्यासिनो कसरी पिट्न?
हरियो टमाटर कसरी बन्द गर्न? हरियो टमाटर संग भरी: पाक सुझाव
समस्या गर्न को कारण, र समाधान: त्रुटि 3194
कसरी प्रभावकारी घर मा glutes पंप
उपकरण 'Ascorutin' हो। अनुप्रयोग र संकेत
कुत्तों को समुचित प्रजाति: वर्णन, विशेषताहरु, तस्वीरहरु र मूल्य
होटल कोपेक होटल, भियतनाम, नहा ट्राग: अवलोकन, विवरण र समीक्षा
वाकवाकी गर्दा महिनावारी हुन्छ भने, के गर्ने? दुखाइ र महिनावारी समयमा वाकवाकी: कारणहरू